TRUESTORY: February 2014
၉၆၉ နှင့် သံဃာများကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည့် အစီအစဉ်များမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတစ်ခုက စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်နေ
From : https://www.facebook.com/myanmarpeoplepower/photos/a.207766569390782.1073741828.207763009391138/271620503005388/?type=1&theater
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်မှစတင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး
တစ်ခု၏ အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောကြားချက် ဟု ယူဆရသော အသံဖိုင်တစ်ခု ပြန့်နှံ့လာခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များ၊ အမျိုးသားရေး အင်အားစုများကို တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်သည့်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပေးပို့သော အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးဆိုင်ရာ သ၀ဏ်လွှာအား အစိုးရနှင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ ပြန်လည်တာဝန်လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃာတော်များက အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဟု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက က လွှတ်တော်သို့ ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းရန် လိုလားနေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိနေသော်လည်း ယင်းတို့၏ သဘောဆန္ဒကို ရယူခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"သမ္မတ သ၀ဏ်လွှာ ရောက်တဲ့နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
Posted by TRUE STORY at 11:13 PM No comments:
ဒီနေ့ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းမှာ ပြုလုပ်သော ဦးနေမျိုးဇင်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဟောပြေားပွဲဟာ လူဦးရေ၁၀၀ကျော်ကျော်နဲ့ ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲ
မှာတောင် ဘုမသိ ဘမသိနဲ့လိုက်လာပြီးနေမျိုးဇင်
ဟေားမယ်လဲ ဆိုရော ထပြန်သွားသူတွေတောင်ရှိ
Posted by TRUE STORY at 11:02 AM No comments:
ထန်းတပင် မြို့နယ် ရန်ကုန်- ပုသိမ်
ကားလမ်းဘေးရှိ မငေးစု ကျေးရွာ
ထိပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်
ည ၉ နာရီခန့်က အသက် ၁၇ နှစ်
အရွယ် အမျိုးသမီးကို အဓမ္မ ပြု
ကျင့်ပြီး ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) ၏
ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုသူကို ဆိုင်ကယ်
နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ
အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်ကို အလိုမတူ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်း ထွက်ပြေး
Posted by TRUE STORY at 10:46 AM No comments:
NLD ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူသည် ရဟန်းဟံဃာ များအား "နဖားကြိုး တပ်ပြီးဆောင်ရွက်စေ"၊ "အယာတိုလာကိုယ်တော်တွေ" ဟူ ပြောကြားခဲ့ခြင်း၊ ဆရာတော်ဦးဝီရသူ အား "ဘုန်းကြီးရူး" ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်း စသည်အားဖြင့် သံဃာတော်များနှင့် သာသာနာတော်
Posted by TRUE STORY at 10:33 AM No comments:
မျိုးစောင့် ဥပဒေပြဌာန်းရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်း
ရွက်ပေးရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်း လာကြောင်း သိရှိရသည်။
အမျိုး ဘာသသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး
ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဌ အင်းစိန်ရွာမ ဆရာတော်ကြီး
ဦးဆောင်၍ သံဃာနှင့် ပြည်သူ သိန်းနှင့်ချီ၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ခဲ့သည့် မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးရေး တင်ပြချက်ကို သမ္မတ
ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်းလာ
ခဲ့ကြောင်း လွှတ်တော်ရုံး အရာရှိတစ်ဦးက
"သမ္မတကြီး ပို့တဲ့ သ၀ဏ်လွှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
မင်္ဂလာရှိသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ပါစေ — with Mani Addy.
Posted by TRUE STORY at 9:26 AM No comments:
စစ်ကိုင်းတောင် ရိုး မြစကြာကျောင်းတိုက်
>> http://www.myanmarsuperstars.com/2014/02/myanmar-sexy-model-girl-collection-2.html <<
Myanmar Sexy Model Girl Collection-2ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရန်
ပြိုင်ကားအုပ်စုဖြင့် အငှားယာဉ်မောင်းအား ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ပြီး အငှားယာဉ်အား ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် အမှုမှပြိုင်ကားတစ်စီးသိမ်းဆည်းရမိ
ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ၁၆.၂.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၁၁၅
မောင်းနှင်သည့် ၈က/၈၂၇၄ အငှားယာဉ်အား ပြိုင်ကားများမှ ကျော်တက်
ပိတ်ရပ်ကာ ယာဉ်ပေါ်ပါ ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည် ကိုအင်ထိတ်ကြန့် တို့အား ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ပြီး အငှားယာဉ်အား ထုရိုက်ခဲ့သဖြင့်
Posted by TRUE STORY at 8:58 AM No comments:
စပါးကြွေးတောင်းမယ့် ထိုင်းလယ်သမားတွေ ထွန်စက် အစီး ၅၀၀ ဖြင့် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ လေဆိပ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားနေ
ဘန်ကေက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀
စပါးဖိုး မရရှိသေးသော Sing Buri
ခရိုင်မှ လယ်သမား တစ်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်သည် ဆန္ဒပြရန်
ထွန်စက် အစီး ၅၀၀၊ မော်တော်ဆိုင်
ကယ် အစီး ၁၅၀ တို့ဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီး သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ လေဆိပ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည်။
The Bible TV mini-series တွေထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါး
(စေတန်) အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် Mohamen Mehdi Ouazanni
series တွေနဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ရုပ်ရှင် Son
Posted by TRUE STORY at 8:48 AM No comments:
Posted by TRUE STORY at 8:45 AM No comments:
၅၉ (စ)ကို မပြင်ချင်တာ မြန်မာသွေးစစ်စစ်ကသာ မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်စေချင်လို့ပါ
ယခုအချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ၂၀၁၅
သို့ နီးလာသည်နှင့်အမျှ ပြည်တွင်း
လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း နေရာ
အသီးသီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်နေ ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် သမ္မတဖြစ်ရေး၊ ပါတီအနိုင်ရရေး
Posted by TRUE STORY at 8:37 AM No comments:
ထက်မြက်သူက နားထောင်ကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ညံ့ဖျင်းသူက မပြတ်ညည်းတွား တိုင်တန်း တယ်။
ထက်မြက်သူက သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ တုံးအချင်ဟန်ဆောင်တယ်။ညံ့ဖျင်းသူက ဘယ်အ ချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက်မြက်သူလုပ
်ပြီး ဂုဏ်ဖော် တယ်။ ထက်မြက်သူက ဘဝရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို မှတ်သားတယ်။
ညံ့ဖျင်းသူက တစ်ဖက်သားရဲ့အားနည်းချက်တိုင်းကို မှတ်သားတယ်။ ထက်မြက်သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟာသလုပ်တယ်။
ညံ့ဖျင်းသူက တစ်ဖက်သားကို ဟာသလုပ်တယ်။ ထက်မြက်သူက ဆင်းရဲနွမ်းပါးချိန်မှာလည်း
Posted by TRUE STORY at 8:33 AM No comments:
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အတွင်း တရားမ၀င် ငါးခိုးဖမ်းသည့် ထိုင်းနှင့်အင်ဒို ငါးဖမ်းသင်္ဘော (၅)စင်းအား မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)မှ ဖမ်းဆီး
ဇုန်အပြင်ဘက် စူလာကျွန်း၏ မြောက်
ဘက်ရေပြင်တွင် တရားမ၀င် ငါးခိုးဖမ်းနေ
သည့် ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်
ကျူနာ (Tuna) ငါးဖမ်းသင်္ဘော (၅)စင်းအား
“ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်
ငံသား (၂၁) ဦး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှာ
Posted by TRUE STORY at 8:29 AM No comments:
အစိုးရအဖွဲ့၏ မူဝါဒအပြောင်းအလဲ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများ၏ လှုပ်ရှား၊ ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုများကို ရန်ကုန်မြို့ဆူးလေစေတီအနီးမှ လူတစ်စုက အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင့်၏ နယ်လှည့်ပါးရိုက်မည်ဟု ပြောခဲ့သော
စကားများ၊ အာဇာနည်ဗိမာန်ကုန်းမြေတွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အုတ်ဂူဆောက်မည့်ကိစ္စ၊ လျှပ်စစ်မီ
Posted by TRUE STORY at 8:20 AM No comments:
ကျွန်တော်တို့ ဟာ မြို့ တွင်းအလုပ်ကိုင်
တစ်နေ့ က ညပိုင်း ၇နာရီခွဲလောက်က
အလုပ်ပြန် လှည်းတန်း ကားမှတ်တိုင်ကနေ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေးဘက်သို့အဓိပတိမော်တော်ယာဉ်လိုင်းမှပြေးဆွဲသော
Posted by TRUE STORY at 8:08 AM No comments:
ပြဿနာဖြစ်လာသည့်အခါ အထက်မှ ရပ်တည်ပေးမှုမရှိ၊ အနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသော ယာဉ်ထိန်းတပ်ကြပ်ကြီး
ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် နေသူရိန်၊ အမည်ရင်း စနေထွန်း (၇၇) ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေး မိသားစု ၏ ဖေဖော် ၀ါရီလ (၉)ရက်နေ့ နံနက် (၁၁း၃၀) အချိန်ခန့်နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၃၀) အချိန်တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း၊ မီးပွိုင့်
၂၀၁၄ ဖေ၁၉ ရက်နေ့ပဲခူးမြို့ တွင်ရွှေနတ်တောင် ( ပဲခူး- ညောင်လေး
ပင် ) ယာဉ်လိုင်း ...
ယာဉ်အမှတ် 9F / 5095 နှင့် …
၀င်းရတနာ ( ပဲခူး- ရွှေကျင်) ယာဉ်လိုင်း ....
ယာဉ်အမှတ် ၅ခ/ ၆၇၄၅ တို့ နှစ်စီး …
ခရီးသည် လုခေါ်ယူရင်း ….
စကား အချေအတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ထို့ နောက် …
ယာဉ်နှစ်စီး လမ်းကြောတစ်ခုတည်း ၌ …
Posted by TRUE STORY at 7:54 AM No comments:
Posted by TRUE STORY at 7:51 AM No comments:
မြန်မာပြည်ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုသည့် လူမှုကွန်ရက်တွင် စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းများ တစ်ဦးပြီး တစ် ဦး ပေါ်ထွန်းလာလျက် ရှိရာ ယခုနောက်ဆုံး နယ်လှည့်ပါးရိုက် ဦးအုန်းမြင့်၊ ဗိုက်ကြီးလှန် ဦးအေးမြင်
Posted by TRUE STORY at 7:47 AM No comments:
လာတော့ ရင်နာနာနဲ့ပဲ ထောင်း
မာန်အောင်ကျွန်းဟာ တကယ်တော့ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့နဲ့
Posted by TRUE STORY at 7:40 AM No comments:
Posted by TRUE STORY at 7:37 AM No comments:
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ရန်ကုန်တွင် ရှိနေသည်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်မျက်ပြတိုက်မှာ ပြသထားပါတယ်။
အရွယ်အစားကတော့ ပုံမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အလေးချိန် ခန့်မှန်းချေ ၃၃ တန် ရှိပါတယ်။
ဒီမနက် ရန်ကုန် ကျောက်မျက်ပြတိုက်မှာ တွေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး
Posted by TRUE STORY at 3:14 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 2:42 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ထဲ ၀င်စဉ်က ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ဖြစ်ကာစက နယ်စပ်ဒေသ တွေမှာ တိုင်းပြည်ကို ဖျာစုတ် ကလေးသုံးချပ်နဲ့ ကာခဲ့ရတယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ တပ်မ(၃)မနဲ့ တိုက်နေရတယ်။ အရှေ့မြောက် ဒေသမှာ 'ဗကပ' က ခြိမ်းခြောက်နေတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ၀မ်ပုံအထွက်မှာ ပြည်သူတွေက ကူညီကြတယ်။ ကျိုင်းတုံ ဒေသ မိုင်းပန် ၊ မိုင်းလား ၊
Posted by TRUE STORY at 2:37 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 2:10 PM No comments:
ရဲရင့်ပွင့်လင်းပြီး ကိုယ်စိတ်ထဲက ပုံစံအ တိုင်း နေထိုင်ပြုမူတတ်သူလေးကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပါပဲ။ အားလုံးနဲ့ မတူတဲ့
ပုံစံမျိုး၊ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်
ရင်ထဲ ၀င်လာခဲ့တဲ့ သူမနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက်
သူမရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်
ရှားမှုနဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း မေး
ထိုသို့မောင်းနှင်လာရာ (၇)မိုင် ကားမှတ်တိုင်အနီးအရောက် ယာဘက် ပလက်ဖောင်းဘေး ကပ် လျက် ယာဉ်ကြော၌ ရပ်ထားသော ဟွန်ဒါစီဗစ်(နံပါတ်မမှတ်မိ)ယာဉ်အား ကျော် တက်မောင်းနှင်
Posted by TRUE STORY at 9:59 AM No comments:
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်မှ သတင်းအမှား ဖော်ပြခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း
ဆိုသော သတင်းအား ရေးသားထား
သော news watch ဂျာနယ်နှင့်
ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်သည် MJN ရုံးတွင်
(NDF)ပါတီ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်က “မီဒီယာသမားဆိုတာ
Posted by TRUE STORY at 9:38 AM No comments:
ကိုကိုးကျွန်းပေါ်တွင် တရုတ်ရေတပ်စခန်းတည်ဆောက်နေသည်ဟူသည့် သတင်းကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပိုင် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်အကြားတွင်တည်ရှိသည့် ကိုးကိုးကျွန်းပေါ်တွင် တရုတ်ရေတပ်စ
ခန်းနှင့် တရုတ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်လျှက်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယ သတင်းစာတစ်စောင်က ဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းမှာ မှားယွင်းနေပြီး မူလလေ ယာဉ်ပြေးလမ်းကို ပြန်
ဟု မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး
ဘင်္ဂါလီအရေးမှာ တစ်စိမ့်စိမ့်ဖြင့်တွေးပါက စိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေပြီး ယင်းအရေးကို ဖြေရှင်း ရန်မှာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေက အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဥပဒေကို ဆန့်ကျင်သူများအား ဘင်္ဂါလီအရေးတွင်
ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ၀န်းရံတည်ရှိနေမှု၊အမေရိ
ကန်နှင့် ဥရောပတို့၏ စီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်၌ အာရှဒေသအပေါ် အာရုံစိုက်လာမှု၊ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများအဖြစ် ထွက်ပေါ် လာနိုင်သော နိုင်ငံများ တည်ရှိနေမှုတို့သည် အာရှဒေသ၏ လက်ရှိဖြစ်တည်နေမှု ဖြစ်သည်။
၎င်းဖြစ်တည်နေမှုအပေါ် ဒေသတွင်း ပင်လယ်ပြင်ပိုင်ဆိုင်ရေး အငြင်းပွားမှုများ၊ အမေရိကန်၏
အင်္ဂလီဆူပူမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများအပေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဒေါက်တာအေးမောင်တင်သွင်းသည့် အဆို
နယ်၌ အင်္ဂလီဆူပူမှုကြောင့်ဖြစ် ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများအပေါ် ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတော်
၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် နယ်စပ်လုံခြုံရေး၊ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူဝင်လူထွက် စီမံခန့်ခွဲရေး
ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်ရေ တို၊ရေရှည်အထူးအစီအမံ တို့ဖြင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ
သဲကုန်း သပိတ်စခန်း သတင်းနောက်ကွယ်က ဘယ်မီဒီယာ မှ ထည့်မပြောတဲ့ အမှန်တရား
လို့ တွေးမိပေမယ့် အမှန်ကို သိရက်နဲ့
မပြောတာဟာ တာဝန်ရှိသလို ခံစား
ဆူသလို အမှန်တရား ကိုဖုံးပြီး သတင်း
အမှားတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို အဆိပ်ခတ် နေတဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ
မီဒီယာတွေ အစိုးရ အကြပ်အတည်း ဖြစ်စေ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ စာဖတ်သူကို လိမ်လည်တာတွေ ဟာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ တိုးပွားလာနေပါတယ်။ဒါဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ လို
Posted by TRUE STORY at 8:53 AM No comments:
Posted by TRUE STORY at 8:44 AM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဘုံရန်သူမှာ ၀ီ-ဝေ-၀ိုင်း ဟု ဆို
NLD ပါတီအနေဖြင့် အမျိုးသားရေးနှင့်
ပတ်သက်ပြီး သံဃာထုနှင့် ထိပ်တိုက်
ရောက်ရှိလာနေပြီး ထိုသို့ ရောက်ရှိ
၏ လူယုံတော် များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း
"ဒေါ်စုကို နာမည်ဖျက်တာ၊ ဒေါ်စုကို
Posted by TRUE STORY at 8:41 AM No comments:
ကျုပ် ဒီစာကို နှလုံးသွေးနဲ့ရေးတာပါ။ ကျုပ်ဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရအ လိုတော် ရှိ လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်က ဓမ္မစစ် NLD-ပါတီဝင် တစ်ယောက်ပါ။ အပုပ်ချတာမဟုတ်ပါ ဘူး။ ဝေ ဖန်တ ယ်၊ ထောက်ပြတယ်၊ ဒါဟာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒေါ်စုရဲ့ 27.5.2013 ရက်နေ့က ပါတီဗဟို အစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့တဲ့စကား ဒေါ်စုဟာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ တစ် ဦး တည်းသော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက အလေးထားတဲ့သူ ဒေါ်စုရဲ့ စကား
တရုတ်ပြည်မှာ ဘဏ်တစ်ဘဏ်ကို ဓားပြ ၀င်တိုက်ပါတယ်။ ဓားပြတွေက "ဘယ်သူမှ မလှုပ်နဲ့။ ဒီပိုက်ဆံ တွေက အစိုးရနဲ့ ဆိုင်
တယ်။ အသက် ကတော့ ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်
တယ်" အဲ့အခါ လူတွေက မခုခံဘဲ တိတ်တိတ်လေး ၀ပ်နေ လိုက် ကြပါတယ်။
ဒါက လူတွေရဲ့ တွေးခေါ်မှုကို ပြောင်း
လိုက်တဲ့ "Mind Changing Concept" ပါ။
ဓားပြတိုက် ပြီးတော့ MBA ဘွဲ့ရထားတဲ့
ဓားပြ အငယ်က ပိုက်ဆံတွေကို ရေဖို့
Myanmar Passport holders can travel to countries below without Visa
6. Macau (Visa on Arrival, VOA)
7. Indonesia (ဘာလီကျွန်း သို့လေ ယာဉ်ဖြင့် တိုက်ရိုက် ၀င်လျှင်
ဗီဇာ မလိုပါ။ ကျန်နေရာ မှဝင်လျှင် ဗီဇာ ကြိုတင် လျှောက်ထား
လေယာဉ် ဖြင့်တိုက် ရိုက် ၀င်လျှင် Arrival Visa ကို တစ်ဦးလျှင် USD 60 ဖြင့် ထုတ်ပေး ပါသည်။)
အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Viber ကို ဂျပန် ကုမ္ပဏီ Rakuten က ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ နဲ့ ၀ယ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ Viber ကို အသုံးပြုသူပေါင်းဟာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ သန်း ၃၀၀ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by TRUE STORY at 5:00 PM No comments:
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိနေသော စာအုပ်စာစောင်များကို ဂျာနယ်ဝယ်ရင်း လေ့လာကြည့်
Posted by TRUE STORY at 4:20 PM No comments:
ဒီဓါတ်ပုံတွေ ဟာ တောင်ငူ မြို့မ ဈေး မီးလောင်ချိန်မှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တဲ့
တပ်မတော် ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေပါ ။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်မီဒီယာ ၊
ဘယ်သတင်းစာမှာ မှ ဖော်ပြခြင်း
ဖော်ပြခြင်း ခံရဖို့ ဆိုတာထက် တရား
မျှတ စွာ ကောင်းရင် ကောင်းသလို ၊ မကောင်းရင် မကောင်းသလို ဖော်ပြစေ ချင်ပါတယ်။ကေအိုင်အေ ဂွမ်မော် ရန်ကုန်
Posted by TRUE STORY at 4:13 PM No comments:
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီ က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၀င်းအတွင်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည် ငြိမ်အေး ချမ်းရေး ကော်မတီဆောင် I-12 တွင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား
Nicky Bray, Air Commodore (UK
OF 6) မှ လာရောက်တွေ့ဆုံရာ
၂၀၁၅ တွင် သမ္မတရာထူး ရရှိနိုင်ရေး
Posted by TRUE STORY at 4:00 PM No comments:
"ဘန်ကောက်တွင် ဆန္ဒပြပိတ်ဆို့ထားသည့် နေရာများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှင်းလင်းမှုစတင်"
သောကြာနေ့ နံနက်အစောပိုင်း ကတည်း
က အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့
များကို ဘန်ကောက်တွင် ဖြန့်ကျက်ထား
လိုက်ပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူများ သိမ်းဆည်း
ထား သည့် နေရာများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း မည့် စစ်ဆင်ရေးကို အစပြုခဲ့သည်။ လနှင့်
နေရာများကို ရဲများက သွေးထွက်သံယို
မရှိဘဲ တဖြည်းဖြည်း ချင်း ရှေ့ဆက် ရှင်း
လင်းနေဆဲဟု သတင်းများက ဆိုသည်။
Posted by TRUE STORY at 3:53 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 3:44 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 3:41 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 1:21 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 5:51 PM No comments:
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကင်တပ်ကီ ပြည်နယ်ရှိ Corvette ပြတိုက်အတွင်း ဂလိုင်ပေါက်ကြီး ဖြစ်ကာ ကားရှစ်စီး ကျွံကျ
ပြည်နယ်ရှိ Corvette အမျိုးသား ပြတိုက် အတွင်း၌ ဖေဖော်
ဝါရီ ၁၂ ရက်က ရုတ်တရက် ကြီးမားသော ဂလိုင်ပေါက်ကြီး
ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းဂလိုင်ပေါက်
Posted by TRUE STORY at 5:47 PM No comments:
We are one ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားသီချင်းကို မော်ဒယ်ကောင်လေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နဲ့MTV ရိုက်တဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်(ဓါတ်ပုံ-၁၈ ပုံ)
Posted by TRUE STORY at 5:41 PM No comments:
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက တပ်မတော်မှ တရားမ၀င်သစ်များ တန်ချိန်ထောင်နှင့်ချီကာ ဖမ်းဆီးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ KIAထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် တရုတ်ကုန်သည်များအကြား ပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်နေ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်
တွင် တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မှု
ခဲ့ကာ အဆိုပါသစ်များနှင့် လုပ်
ငန်းသုံး ယန္တရားများကို ဖမ်းဆီး